राजि’नीति लाई पेसा बनाउन हुदैन=के सि, तपाईंको सुझाव के छ? – Gandaki Chhadke Nepal
August 2, 2020 August 2, 2020 News DeskLeaveaComment on राजि’नीति लाई पेसा बनाउन हुदैन=के सि, तपाईंको सुझाव के छ?
राष्ट्रिय जनमो’र्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केही राजनीतिक दल’का केही नेताले राजनीतिलाई व्या’पार बनाएको गु’नासो गु’नासो गरेका छन्। उनले भने, “राजनीति भनेको समाज सेवा हो, तर केही नेताले राज’नीतिलाई व्यापार बनाए ।
जनताको बलि’दानबाट प्राप्त भएको व्यवस्था खरा’ब नभए पनि स’ञ्चालन गर्ने नेताहरुमा इमान नभएको दु’खेसो गरे। उनले स’त्तारुढ नेकपाभित्रको पछिल्लो विवादलाई अध्यक्ष केसीले नेता के’न्द्रित राजनीतिको सङ्ज्ञा दिए। उनले नेकपामा भावनात्मकरूपमा एकता नै नभएका कारण सम’स्या आएको बताए। रासस
व्यापारीक स्वा’र्थमा पशुपतिमा भइरहेको भारतीय अति’क्रमण अस्वी’कार्य : मन्त्री भट्टराई…हेर्नुहोस।
काठमाडौं : पर्यटन सँस्कृति तथा ना,गरिक उ,ड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, सां,स्कृतिक तथा पु,रातात्विक पक्षको सं,रक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने बताएका छन् ।’उनले व्यक्तिगत र व्यापारीक स्वा’र्थमा पशुपतिमा भइरहेको अ,तिक्रमणलाई भने स्वीकार नगर्ने स्प’ष्ट पारेका छन् ।सामाजिक सन्जाल ट्वीटरमार्फत् मन्त्री भट्टराईले यी धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘पशुपति क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृ’तिक तथा पुराता’त्विक पक्षको सं,रक्षण र सम्ब’द्र्धन गरिने छ । स्थानीय जात्रा र पर्वको जगेर्ना गरिने छ । व्यक्तिगत र व्यापारीक स्वार्थमा पशुपतिमाथि भइरहेको मानव अ,तिक्रमणलाई भने स्वीकार गरिने छैन । कुरा यही हो ‘।
मास्कबारे नयाँ नि,र्देशिका जारी गर्दै डब्लूएचओले भन्योः यसले को,रोना रोक्न मद्दत गर्ने देखियो…हेर्नुहोस l
ज्ञानेन्द्र शाहि ,हेमराज थापा सहित ५२ जना प’क्राउ